Weeraro ka Dhacay Labada Shabeelle oo ay Dad ku Dhinteen
Mas’uuliyiinta magaalada Qoryooley ayaa VOA u sheegay in weerar ay shalay Al-Shabab kusoo qaadeen magaalada ay ku dhinteen 9 qof.
Guddoomiyaha degmada Sayid Cali Ibrahaim ayaa VOA u sheegay in dhimashadu ay ka dhalatay baasuuke ay soo rideen Al-Shabab.
Waxaa kale oo soo baxaya warar sheegaya in madaafiic ay rideen ciidamada AMISOM ay kudhinteen dad rayid ah magaalada Qoryooley, hase yeeshee Guddoomiyaha Gobolkaaas Ibraahim Aadan Najax ayaa VOA u sheegay inay baadhayaan eedahaas. AMISOM kama jawaabin eedahaas inkastoo ay VOA la xiriirtay.
Al-Shabaab ayaa, dhinaca kale, sheegtay inay shalay weerar kedis ah ku qaadeen ciidamo ka socda dalka Burundi ayna askar ka tirsan AMISOM dileen, hase yeeshee AMISOM oo ay la xiriirtay VOAdu ayaan weli ka jawaabin eedahaas.
Dhageyso Weerarka Qoryooley